Imandarmedia.com.np: दशैंमा मासु खादै हुनुहुन्छ ? होसियार ज्यानै जानसक्छ !
Big News, Lifestyle » दशैंमा मासु खादै हुनुहुन्छ ? होसियार ज्यानै जानसक्छ !
दशैंमा मासु खादै हुनुहुन्छ ? होसियार ज्यानै जानसक्छ !
स्वास्थ्य परिक्षण नै नगरीमासु खादै हुनुहुन्छ ? यदि हो भने होशियार ! दशैंमा बढी मासुको खपत हुने र मासुका विभिन्न परिकार खाने प्रचलनले स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने जनाउँदै चिकित्सकले सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
Trending : Big News, Lifestyle